Adị n'elu kọmputa dị ka ọhụrụ na otu click dozie nsogbu nile
> Resource> Utility> Olee otú iji ọsọ Up Computer Back ya Original Ijeụkwụ
Ọtụtụ n'ime kọmputa ọrụ tarala a: kọmputa ijiji na mbu, na-ewetara gị a elu arụmọrụ na-arụ ọrụ, mgbe o yiri ike gwụrụ na umengwụ igafe. Ị na-mgbe na-eche usoro iji zaghachi gị arụmọrụ dị ka malite n'elu, na-emeghe faịlụ, loading weebụsaịtị na ndị ọzọ na aga-eme, nke na-eme ị na-ata ahụhụ. Dị nnọọ ka a n'ụzọ zuru ezu kwajuru ụgbọ ala, stconverting kwụsịrị na-abaghị uru arọ pụrụ ime ka ọ na-agba ọsọ ngwa ngwa. Ma na kọmputa, tufuo nwụrụ anwụ arọ apụghị ikpochapụ ihe niile elu. Iji adị n'elu kọmputa azụ ya mbụ ijeụkwụ, e nwere ihe ị chọrọ ime. Wondershare 1-Click PC Care Software bụ onye pụrụ inyere gị aka ime ya na adị gị PC site 300% na otu Pịa. N'agbanyeghị na ị na-eji Windows XP, Windows 7 ma ọ bụ Vista.
Ịchọpụta gị PC ọmụma mbụ:
Mgbe wụnye na launching a ọsọ-elu kọmputa software, ọ ga-elele na akpaaka na kọmputa gị ọmụma dị ka n'okpuru ma gosipụta zuru ezu akụkọ maka gị. Ị adịghị mkpa na-a kọmputa ọkachamara. Ihe niile ị chọrọ ime bụ naanị otu click on "Idozi Ugbu a". Na 1-Click PC Care ga-eme ekpe n'ihi unu:
PC ọmụma ịlele
Wụt gị PC ngwaike ozi, dị ka CPU, ebe nchekwa modul, Obodo ọkwọ ụgbọala, isi osisi, video, na netwọk.
PC arụmọrụ ịlele
Ime n'aka na i nwere kwesịrị ekwesị ngwaike na-akwado Windows bụ oké egwu. Mgbe ahụ ego gị Windows buut oge, Windows paging faịlụ size, usoro ọrụ ọnọdụ, junk faịlụ na ndekọ redundancy na PC gị na, na kọmputa gị na netwọk ntọala.
PC Kwụsie ịlele
Find ndekọ njehie, ngwa njehie na usoro njehie maka gị usoro kwụsie ike. Lelee gị PC si netwọk Packet ọnwụ ruru iji hụ na ị a mụ na ngwa ngwa na netwọk.
PC Security ịlele
Ịchọpụta netwọk nche, Windows nche na onye nzuzo na PC gị na, iji hụ na ị na-na a mụ na mma Windows gburugburu ebe obibi.
Adị n'elu kọmputa na otu click
Mgbe atule ọrụ dechara, ọ na-enye gị ihe kasị mma ndụmọdụ na-esi adị n'elu gị PC. Ị dị nnọọ mkpa na-agagharị na akụkọ, na na see "Idozi Ugbu a". Mgbe ahụ, ọ ga-amalite na-akụ na ịrụzi kọmputa gị nzọụkwụ site nzọụkwụ, dị ka ndị dị ọcha ndekọ, wepụ junk faịlụ, ebuli Windows mmalite na ndị ọzọ na ntọala, iwepụ ma ọ bụ kwụsị omume nke na-abaghị uru ma melite netwọk ntọala, wdg N'oge a usoro, ị mkpa ime ihe ọ bụla.
Mgbe fix-agwụ agwụ, Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa na ị ga-ahụ ya malite, na-agba ọsọ omume ma ọ bụ ibu website ngwa ngwa karịa tupu ugbu a.
Ke adianade do, ma ọ bụrụ na ị chọrọ-edozi nsogbu niile mgbanwe na laghachi gị PC ka ihe mbụ ọnọdụ, ị nwere ike kpọmkwem na-eji "1-Click PC Care Weghachi Center" na gị na desktọọpụ iweghachi gị usoro faịlụ na ntọala.
Wondershare 1-Click PC Care Nakwa awade ezigbo oge nchebe maka kọmputa gị, iji hụ na gị na kọmputa na-agba ọsọ n'okpuru a nchebe na ezigbo ebe obibi.
Network Nchedo: gbochie gị PC netwọk n'ebe virus attact na hijacked.
Windows Nchedo: gbochie gị Windows pụọ n'aka ojiji nkwụnye na na-eme ka ọ na-agba ngwa ngwa.
Ntụgharị Nchedo: gbochie gị ntụgharị nchọgharị n'ebe Internet ohere nsogbu na obi mgbanwe.
Nchekwa onwe-Agbakwuru Nchedo: gbochie gị buut igba egbe omume n'ebe obi mgbanwe na kọmputa ngwa ngwa.
Ndekọ Nchedo: Gbochie gị ndekọ n'ebe obi ọgụ, Trojan ọgụ na virus ọrịa.
Olee otú Idozi Mscorwks.dll Njehie Fast na Mfe